गोकुल बाँस्कोटा भन्छन् : यतिबेला मजस्ता संघीयताविरोधी पक्कै खुसी होलान् ! – eSidhakura
मुख्य पृष्ठसमाचारगोकुल बाँस्कोटा भन्छन् : यतिबेला मजस्ता संघीयताविरोधी पक्कै खुसी होलान् !
गोकुल बाँस्कोटा भन्छन् : यतिबेला मजस्ता संघीयताविरोधी पक्कै खुसी होलान् !
काठमाडौं –काठमाडौं- पूर्वमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले पुनः आफू संघीयताको विपक्षमा रहेको अभिव्यक्ति दिएका छन्। मंगलबार उनले एक ट्विट लेख्दै आफूलाई पुनः संघीयता विरोधी प्राणीको रूपमा चिनाएका हुन्।
‘प्रादेशिक विकास र सेवा केन्द्रका रूपमा काम गर्ने प्रदेश सरकारहरूमा देखिएको अस्थिरताले नेपालमा यो संरचनाको आवश्यकता नै थिएन भन्ने म जस्ता संघीयता विरोधी प्राणी पक्कै खुसी होलान् भन्ने आशाका साथ, स्थीरता विरोधी तर, अग्रगामी भनी स्वतः जानिने तत्वका खबर बुझ्ने ईच्छा हुँदा यो कुरा लेखें’, उनले लेखेको ट्विटमा उल्लेख छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि नेकपाभित्रको द्वन्द्वको असर प्रदेश तहसम्म पुगेको थियो। प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भएपछि पनि नेकपा विभाजन भयो। जसले गर्दा सबैजसो प्रदेश सरकारहरू अस्तित्व जोगाउन संघर्षरत छन्।
मुख्यतः ओली निकट नेताहरूले नेतृत्व गरेका प्रदेश सरकारहरू ढाल्ने प्रयास विपक्षीहरूले गरिरहेका छन्। जसलाई बाँस्कोटाले प्रदेश सरकारहरूमा अस्थिरता देखिएको चर्चा गरेका हुन्। उनले यसअघि पनि देशलाई संघीयता खाँचो नभए पनि द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि मानिदिनुपरेको बताएका थिए।
‘द्वन्द व्यवस्थापनको लागि मान्दिनु परेको न हो, देशलाई खाँचो त थिएन संघीयता’, गत नोभेम्बर ६ मा उनले ट्विट गरेका थिए। बाँस्कोटामात्रै होइन, स्वयं ओली र उनीनिकट अन्य नेताहरूले पनि संघीयता विरोधी अभिव्यक्ति दिने गरेका छन्। कतिपयले भने सार्वजनिक रूपमै भन्ने गरेका छन्।
तिनै मध्येकी एक हुन्, ओली निकट नेता निरुदेवी पाल। उनले डिसेम्बर ३१ मा फेसबुकमा स्टेटस लेख्दै प्रधानमन्त्रीलाई संघीयता खारेज गर्न भनेकी थिइन्। ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू आँट गर्नुस्, संघीयता खारेज गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र संसदको सिट १०५, केन्द्रको मन्त्रीमण्डल बढीमा १५ सदस्यीय र भ्रष्टाचारीलाई जेलको कालकोठरीमा सडाउने आँट गर्नुस्’, पालको आग्रह थियो।